Ary Momba Ny Fonja Ao Meksika, Iza No Mba Miresaka Azy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2016 2:17 GMT
Ireo mpifonja ao avaratr'i Mexico City. Sary avy amin'i Eneas de Troya mpampiasa Flickr, nampiasàna ny lisansa Creative Commons 2.0.
Ny Jona 2016 no nanomboka nihatra tao Meksika ny fanavaozana iray miteraka resabe tamin'ny rafitry ny fitsaràna, fantatra amin'ny hoe Rafitra Vaovaon'ny Fitsaràna Heloka Bevava (NSJP), izay efa nankatoavina hatramin'ny 2008. Ny endrika miparitaka be sy fantatra amin'ny NSJP dia ny fitsaràna am-bava sy fankatoavana zotra iray tsy mifankaiza amin'ny an'i Etazonia; na izany aza dia misy fiantraikany ihany koa amin'ny rafitry ny fonja io, izay zara raha misy na tsy misy mpiresaka mihitsy eny anaty media mahazatra, ankoatry ny fampitàna azy ireny rehefa tranga goavana mahazendana toy ny fandosiran'i “El Chapo” Guzmán, ilay olo-malazan'ny fanondranana zava-mahadomelina izay efa indroa no tafatsoaka ny fonja lazaina fa tsara aro indrindra.
Atsy ho atsy dia mety hiaina fiovàna amin'ny resaka isan'ny mpifonja ao aminy ireo fonja ao Meksika, hatramin'ny nidiran'ny NSJP hanan-kery, andrasana hahazo famotsorana ny maro amin'ireo olona voatàna , araka ny tatitra tamin'ny Jona 2016 navoakan'ny gazety Zócalo de Saltillo ety anaty aterineto:
Ho afaka hiriaria an-dalambe atsy ho atsy ny 50.000 amin'ireo olona any am-ponja federaly sy ao an-toerana. Tsy ireo mpifonja mbola tsy nandalo fitsaràna hatreto, ary araka ny voarakitra anaty bokin'ilay rafitra vaovao momba ny heloka bevava vao avy nolanian'ny Loholona omaly, afaka mangataka fahafahana izy ireo manomboka amin'ny Sabotsy ho avy izao.
Lavitry ny zavamisy ao anatiny amin'izao fotoana izao, mila ahena ny famoahambola ho an'ny fonja, miaraka amin'ny fametrahana ny NSJP, satria hadisoana azo isaina amin'ny rantsan-tànana ihany sisa no mitondra ny voampanga ho any am-ponja, tafiditra amin'izany ny famonoana olona, ny fanolànana, ny asa fampihorohoroana ary ny heloka mihatra amin'ny fahasalamàna (fivarotana an-tsokosoko zava-mahadomelina). Ireo heloka madinika toy ny halatra na fanaovana hosoka dia tsy voatery handefasana ny voampanga ho any am-ponja.
Talohan'ilay fanavaozana dia tsy maintsy notànana (nogadraina) ireo olona nahatanteraka ireny hadisoana ireny, mandra-pahavitan'ny fitsaràna azy, mahatonga fahatsentsenan'ny toerana. io no isan'ny teboka iray navoitran'ny asan'ilay fikambanana México Evalúa izay nozarain'ilay mpampiasa Twitter, René Sánchez Puls, ho an'ireo mpanjohy azy :
Pésimamente manejado el sistema penitenciario #cárceles de #México vean los datos por entidad doc 80 pags @mexevalua https://t.co/wUJ9AUbasY
rafitra fonja ratsy tantana ao #Meksika hita ao anatin'ny angon-drakitra miaty pejy 80
Edgar López. Sary avy amin'i Edgar Efrén López Ramos mpampiasa Flickr, Fonja 02 any atsimo. Nampiasàna ny lisansa CC 2.0.
Fitaratra hitarafana ny zavamisy ao amin'ny firenena ny tsy fitoviana misy ao am-ponja
Miaina olana izay azo itarafana ny tsy fitoviana misy isanandro ao amin'ny firenena ireo fonja Meksikana: raha manana izay rehetra ilaina ny sasany, ny hafa kosa tsy manana na dia ny toerana hatoriana aza.
Tany am-piandohan'ny 2016 nisy fifamonoana nitranga tany amin'ny toeram-pamonjàna iray fantatra amin'ny hoe Topo Chico izay nahasarika ny sain'ireo media nialangàlana hatrizay. Luis González de Alba, mpanoratra iray nandany fotoana tany am-ponja nandritry ny am-polotaona maro, no milaza ireny fomba fikarakaràna ireny ao anatin'ny lahatsoratra iray ho an'ny gazetiboky Nexos hoe:
Niaraka tamin'ilay tantara ratsy momba ny fifandonana teo amin'ireo andiany roa mpikirakira zava-mahadomelina tao amin'ny fonjan'i Topo Chico, any akaikin'i Monterrey, ary nandatsahan-drà sy nahafatesana olona 49, nisy ny fitsirihana ny fotodrafitrasa sy fampahafantarana anay, narahana fanairana tsy nasiana fanazavana sady tampoka, feno tsy fetezan-javatra tsy takatry ny saina: mpifonja avo saranga (VIP) sy efitrano nasiana fanaka araka izay tianao, fahitalavitra, ary hatramin'ny fikarakaràna vatana.
Tohizan'i González de Alba ny fanehoankevitra sy fitantaràna ny zavatra niainany manokana tany am-ponja :
izay vondrona manjakazaka ao no mivarotra aminao ampahan-bato kely hijoroana fa tsy toerana afaka hatoriana, sakafo manokana, tsy resahana ny resaka zava-mahadomelina sy ny firaisana ara-nofo. Sandain'ny mpifonja sy ireo manampahefana daholo ny zavatra rehetra, tsy ny fandeferana ihany fa hatramin'ny fitakiana vola koa amin'ireo mpifonja. Mahatalanjona ahy io : toy izany hatrany ny any anatin'ireo fonja ao amin'ny firenena. Ary ny vaovao dia mitranga ihany koa izany any amin'izay tsara aro indrindra.
Momba ny sehatra misy ireo vondrona ao anatiny, dia ny Alba izay tsy voaresaka matetika no resahany, toy izay lazain'ity lahatsoratra fohy ao anatin'ny gazetiboky Forbes miresaka fandraharahàna ity, mitanisa loharano ofisialy :
Araka ny lazain'ny Kaomitim-Pirenena momba ny Zon'Olombelona (CNDH), ny tsy fahafehezan'ireo manampahefana mametraka ny maha-tò teny azy eny anivon'ny sekoly no mitondra ho amin'ny toedraharaha fiahiana tena.
Ny fiahiana tena, ankoatry ny isa tafahoatra sy tsy maha-ara-pahasalamana ny toerana noho ny isa tafahoatra any amin'ireo fonja ao Meksika, dia olana efa nomarihako tanaty lahatsoratra iray tao amin'ny vavahadin-tseraseran'ny Mexican Times :
Hacinamiento, insalubridad y corrupción tienen en ruina al #SistemaPenitenciario: @tadeo_rc https://t.co/agOuu2I6uf pic.twitter.com/B2zXdHBIqW
Ny isa tafahoatra, ny tsy maha-ara-pahasalamana ny toerana ary ny kolikoly no nikiky ny #RafitraFamonjàna
Tsy hoe manokana ho an'i Meksika ny olona mitranga amin'ny rafitry ny fonja. Notaterin'ny El diario El País tany aloha tany ny momba ny fihoaran'ny isa any anatin'ny fonja izay manjo ireo toby famonjàna any Amerika Latina.
Iray hafa naneho ny ahiahiny momba ny olan'ny fonja ihany koa i Lupita Pitalua :
Mientras escucho un documental sobre el tema, la problemática debe atenderse ¡YA! #SistemaPenitenciario en #México https://t.co/smPDtWsfF3
Rehefa mihaino ilay fanadihadiana momba ilay lohahevitra, tena tsy maintsy atrehina IZAO DIENY IZAO ilay olana
Raha tafapetraka tanteraka ny NSJP dia tsy maintsy miditra amin'ny fanadinoaa izay zavatra nisy tany aloha tany ny rafitra famonjàna ao Meksika, no sady mila ovaina sy hamafisina mba hahatanteraka ny iraka ampiandraiketin'ny lalam-panorenana azy hamerina eny anivon'ny fiarahamonina ireo izay nanao heloka, fa tsy hitàna azy fotsiny any am-ponja dia aveo hamela azy tsy hisy fikarakaràna.